🥇 ▷ Sharafta Hindiya waxay Xaqiijisay Android Q oo loogu talagalay Sharafta 8X iyo Maamuuska 10 ✅
Sharafta Hindiya waxay Xaqiijisay Android Q oo loogu talagalay Sharafta 8X iyo Maamuuska 10
In kasta oo Huawei wuxuu ballanqaaday in Android Q loo heli doono aalado dhowr ah dhowr jeer, waxay umuuqataa in Honor uu kaliya xaqiijiyey cusbooneysiinta taxanaha Honor 20. Si kastaba ha noqotee, maahan. In ka badan todobaad ka hor, Honor India wuxuu runtii ku dhawaaqay in labada taleefan ee kale ay heli doonaan cusboonaysiinta qadka Android. Labada Taleefoon waa Honor 8X iyo Mudane 10.
Labada maamuus 8X iyo Hon 10 10 ayaa la siidaayay sanadkii hore waxayna horey u ahaan jireen kuwa badalaya – Mudane 9X iyo Honor 20, siday u kala horreeyaan. Labada taleefan waxaa lagu sii daayay EMUI 8.x oo ku saleysan Android 8.1 Oreo, laakiin hadda waxaa kor loogu qaaday Android Pie.
Cadeyn in labada taleefan ay heli doonaan casriyeyn loogu talagalay Android Q ayaa ah jawaabaha Twitter-ka ee la xiriira su’aalaha ku saabsan haddii labada taleefan ay heli doonaan casriyeyn.
Balanqaadkeena taageerayaasheena. Macluumaad dheeri ah oo la raaco. pic.twitter.com/qXVp1CcdiF
– Sharafta Hindiya (@HiHonorIndia) Juun 27, 2019
Waxay ku dhammaanaysaa maanta! Qaado fursaddaadii ugu dambeysay ee aad ku quudhsan lahayd boqorka kamarad cusub Ku hel # HONOR20Series on @Flipkart Maalmaha Suuq Weynta!
Iibso hadda: https://t.co/rIxKXwbuAJ
Midkee baad qorsheyneysaa inaad iibsato?
– Shahaado sharaf India (@HiHonorIndia) 18 Luulyo, 2019
Sharafta 8X iyo Maamuuska 10 ayaa la filayaa inay helaan cusbooneysiin ay weheliso EMUI 10, oo ay ugu wacan tahay inay wada bilaabaan taxanaha Mate 30 dhamaadka sanadkaan. Si kastaba ha noqotee, cusboonaysiinta ayaa laga yaabaa inaysan u muuqan labada taleefan, laakiin goor dambe.
Waxaa jira aalado kale oo uusan Honor xaqiijin inuu heli doono cusboonaysiinta Android Q, sida Honor View 20 iyo Honor Play. Waxaan u qaadan karnaa maadaama uu xaqiijiyay cusbooneysiinta Honor 8X iyo Maamuuska 10, in walaalahood ay yihiin Honor 8X Max iyo sidoo kale Mudane note 10 sidoo kale waxaa lagu cusbooneysiin doonaa Android Q.
@HiHonorIndia ma waxay rasmi ka tahay dhamaadka sharafta?
hadda waa la xaqiijiyay? Waxaan isticmaalayaa Mudane 7X. pic.twitter.com/5sPtRu5FMb
– PARTHA BHATTACHARJEE (@partha_iitp) July 29, 2019
Bog cusub oo goor dhaw la soo dhigay, Honor India waxay kaloo xaqiijisay in Honor 7X ay heli doonto cusboonaysiin muujineysa EMUI 9.0 oo ay ku shaqeyso Android Pie laga bilaabo July 30.
(Ilaha: 1, 2, 3 | Via)